ktmkhabar.com - ठुलो गुप्तांगले दियो तनाव, पाइन्टमा गैर कानुनी वस्तु लुकाएको आशङ्कामा समातेर चेक गरियो !
ठुलो गुप्तांगले दियो तनाव, पाइन्टमा गैर कानुनी वस्तु लुकाएको आशङ्कामा समातेर चेक गरियो !
बुधबार, कार्तिक १७ २०७८
संसारमा कहिलेकाहि अचम्मका समाचार सुन्न पाईन्छन् । एउटा अचम्मलाग्दो समाचार अमेरिकी अभिनेता नजोनाह फाल्कनलाई विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचको क्रममा निकै अप्ठ्यारो र विचित्र स्थितिको सामना गर्नुपरेको समाचार बाहिरिएको छ ।
बिमानस्थलमा जाच टिमलाई फाल्कनले आफ्नो पाइन्टभित्र केही कुरा लुकाएको र त्यो लुकाइएको कुरा गैरकानुनी हुन सक्ने आशंका थियो । त्यसैले सुरक्षाकर्मीले उनलाई समाते र उनको तलाशी लिइयो । तर, जाँचमा उनको गुप्तांग निकै ठूलो भएकोले उनले पाइन्टभित्र केही कुरा लुकाएको जस्तो देखिएको खुलासा भएको समाचार बाहिरिएको छ ।
स्विडिस पडकास्ट शो गल्डट्याण्ड्ससँग एक साक्षत्कारमा फाल्कनले आफूसँग भएको यो घटनाबारे बताएका हुन् । द सनमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार फाल्कनले पडकास्ट शोमा यो घटना २०१२ मा सान फ्रान्सिस्को विमानस्थलमा भएको बताएका छन् । उनले शोमा भने ‘सुरक्षाकर्मीहरुले मेरो अंगका कारण मलाई शंकास्पद व्यक्तिको रुपमा देखे र लाइनबाट अलग गरेर मेरो तलाशी लिन लागे ।
फाल्कनले भने ‘ठूलो गुप्तांगका कारण मेरो पाइन्टमा असामान्य उभार थियो जसलाई देखेर सुरक्षाकर्मीले सोधे तिम्रो खल्तीमा के छ ? मैले केही छैन भनें । त्यसपछि तलाशीको लागि मलाई लाइनबाट अलग गरियो । जाँचपछि उनीहरुले मैले पाइन्टमा केही पनि लुकाएको छैन बरु मेरो गुप्तांग निकै ठूलो छ भन्ने थाहा पाए ।’
रिपोर्टका अनुसार ५१ वर्षका जोनाह फाल्कन एक अमेरिकी अभिनेता र टेलिभिजन प्रस्तोता हुन् । फाल्कनले १९९९ मा आफ्नो गुप्तांग संसारमै सबैभन्दा ठूलो भएको दावी गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
अमेरिकी अभिनेता नजोनाह फाल्कन
द भ्वाइस किड्सकी कोच प्रविशाले इन्गेजमेन्ट गरिन्, मंसिर ५ गते बिहे
सुगम पोखरेलको नयाँ गीत ‘तिमि बिना’ सार्वजनिक (भिडिओ)
टेलिशृंखला ‘मेरो एउटा प्रेमकथा’ निर्माण हुने